Isimo ekuphileni phakathi abathandi zihlukile. Ngokuvamile, ezithandwa, kodwa indlela akha - Angazi. Ngezinye izikhathi ezinye zazo isimo esidabukisayo futhi ngokushesha indlela pick it up, umlingani wakho akezi engqondweni. Kodwa ngeke wazi! Akhe ambalwa bese ucabanga indlela esingasiza ngayo intsha.
Bhala ukuthi intombazane, ngakho ukuthula endlini? Futhi kungani ukubhala? Mhlawumbe ngoba uma abathandi ukuxabana sina ne contact siqu kungcono ukulinda - ake uthando poutihnut. Kodwa leli cala "ukugwinya izwe" ngesimo SMS-ki ungathumela. Uyini umlayezo ukwenza? Mhlawumbe into efana lokhu okunikezwayo: "S'thandwa sami, ungabona kanjani esinamafu esibhakabhakeni? Lokhu kungenxa yokuthi wena obuswacile. Come on, I miss ilanga. Guess ngalokho! "Niyabo, impendulo yombuzo othi ngalokho ukubhala intombazane, ngakho-ke wamoyizela, impela nje. Into esemqoka - ukubeka ngamazwi akhe ukufudumala kancane xaxa kanye nobuqotho. Njengomthetho, senze imisebenzi emihle, futhi isigwebo elandelayo: "Sawubona, ngiyazi - ungazi kanjani ngokuthukuthela ngenxa isikhathi eside! Sengibheke ukudweba ngokwengqondo ukumamatheka kwakho. Qinisekisa ukuthi akukubi! ", Njll Futhi uma phakathi abathandi kulungile, futhi ufuna ukwenza into enhle ndoda omncane bomdabu? Khona-ke uvumelane okuqukethwe SMS. Kulokhu, bhala ukuthi intombazane? Ngakho yena wamomotheka, kuyoba okwanele kumnandi smiley-ubuso nencazelo "wonke", "uthando", "round ikhanda". Noma isithombe nge wekati, inkukhu kanye nesiginesha :. "Kuyinto mina nawe" Suit uyamamatheka nge ice cream - cabanga nje kubo into efana: "ukwanga lakho ziyafana esiphundu, amnandi, enhle." Futhi ekugcineni, yini ukubhala intombazane, ngakho-ke wamoyizela futhi ngangibheke phambili ekufundeni usuku lwakho? Sitshele ukuthi ulinde ukumangala - cute, ebukekayo futhi kumangalisa, into amaphupho akho, sinamathemba namaphupho. Into esemqoka - ukuba creative bese beveza into yokuqala. Modern lady abasakhula abanolwazi ekusebenzelaneni nabobulili obuhlukile. Nakuba zonke kuhle uma enendawo izimpawu ukunakwa guy othanda ngempela. Kanjani ukuze ubhale i-SMS intombazane kuthi ukuthula endlini? Okunye ukusikisela: "Honey, ngilapha, side by side. Cha, uqalaza. Bheka enhliziyweni yakho. Nokho, sawubona! "Ungakhathazeki, lincibilike kusukela ukuhlonishwa okunjalo.
Umbhalo phezu kwendawo egandaywe ngamatshe
Kukhona elinye ithuba elikhulu ukwenza kucace ukuthi uthando lwakhe, imizwa uhlangabezana ke. Bhala umyalezo wakho phezu kwendawo egandaywe ngamatshe ngaphansi amafasitela wakhe efulethini noma phambi komnyango wendlu. Ingabe vele udwebe kweqembu, nakuba primitively ayengakwazi ngayo. Futhi ukuhamba naye ngala mazwi: "Kungakhathaliseki ukuthi ziningi kangakanani izimbali ezinhle phansi, akekho kubo engaqhathaniswa intandokazi yami." Noma nakhu ukubhalela intombazane wamomotheka: "Kungcono ungenayo ubani emhlabeni!" Dweba ilanga futhi ngaphakathi esiyingini bhala igama intombi yakhe - yena uzokuqonda ukuthi ufuna lolu phawu ukumtshela zona. Noma omunye othi: "Ilanga wami - kungcono kuwe!" A umqondo omuhle ukubheka emuva neyaziwayo okufanayo ngesimo ilanga, lapho imishayo - imicibisholo spikes ngaphakathi. Circle - igama layo, futhi eduze imisebe - amazwi athambile: enhle, ezithandekayo engavamile, amahle, emangalisayo, emangalisayo, okungcono.
Yiba nomusa futhi abe nokucabangela komunye nomunye bese uyazama nzima ukujabulisa intombazane zezikhathi ezimnandi!
Royal Azuri 5 Ihhotela